नयाँ गीत मार्फत प्रिती आलेले लगाउने भइन् युवाहरुको दीलमा आगो, यस्तो छ उनको गीत (भिडियो हेर्नुस्) – KhabarTime
नयाँ गीत मार्फत प्रिती आलेले लगाउने भइन् युवाहरुको दीलमा आगो, यस्तो छ उनको गीत (भिडियो हेर्नुस्)
प्रिती आले युवा पुस्ता माफ निकै लोकपृय गायीका हुन् । दोहोरी ब्याटलवाट आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएकी प्रितीको गीत जव वजारमा आउँछ एउटा छुट्टै तरंग उत्पन्न हुन्छ । उनका गीतले सांगितको क्षेत्रमा फरक पन प्रस्तुत गर्ने भएकाले वजारमा प्रितीको फरक पहिचान छ ।
जव प्रिती गीत लिएर वजारमा आउँछिन् गीत संगितको क्षेत्रमा तहल्का मच्चिन्छ । जसरी दोहोरी ब्याटल आउँदा लोक दोहोरी र लोकगीतका क्षेत्रमा छुट्टै लहर आयो । धेरैले विरोध गरेको उनको गीतलाई दर्शक र श्रोताले भने मन पराइदिए । त्यसैवाट उनलाई प्रिती भनेर चिनायो ।
उनको पहिरन होस् वा प्रस्तुती नौलोपन देखिन्छ । निकै खुला मिजास र खुलेर बोल्ने प्रितीका अगाडी ओलोचकहरु पनि टिक्न सक्दैनन् । उनले आफ्नो कामवाट नै जवाफ दिन्छिन् । पछिल्लो समय उनले सार्वजनिक गरेको तीज गीत नक्कली साली लाहुरे लाली पनि त्यसकै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । उनको यो गीत संधै आइरहेका तीज गीत भन्दा फरक छ ।
यसल छमछमी नचाउँछ पनि अनि डिस्कोमा झुम्न पनि यो गीतमा सकिन्छ । दुवैलाई मेल खाने गीतमा नेपालमा परम्परा देखि चल्दै आएको लाहुरे प्रवृत्तीलाई पनि उठाएको छ । नेपालीहरुको मुख्य वैदेशिक रोजगारी भनेकै लाहुर हो । लाहुरेसंग युवतीहरुको छुट्टै आकर्षण हुन्छ । त्यसै माथि भिनाजु नै लाहुरे पछि पछि साली भुतुक्क नहुने कुरै भएन ।
नेपालकै परम्परा र संस्कृतिलाई तीज गीतका माध्यमवाट उठाइएको छ । तर कतिपयले यो गीतलाई छाडा भनेर टिप्पणी गरेको पनि देखिन्छ । भिडियो सार्वजनिक गरेकै लिंकमा केही दर्शकले छाडा भनेर कमेन्ट गरेका छन् भने धेरैले फरक पनको अनुभव दिलाएको र गीत सुनेर ननाचीरहन नसकेको पनि बताएका छन् ।
प्रिती आले नेपाली युवाहरुको ढुकढुकी हुन् । सार्वजनिक रुपमा उनलाई छाडा भनेर टिप्पणी गर्नेले नै उनलाई लुकीलुकी हेरीरहेका हुन्छन् । आफुलाई समाजमा सभ्रान्त देखाउन प्रितीका गीतलाई गाली गर्ने र युट्युवमा हजारौं पटक हेर्ने पनि उनै छन् । त्यसैले उनका गीतले वजार तताउँछन्, युवा युवतीलाई नचाउँछन् र आलोचना गर्नेहरुलाई थकाउँछन् ।
केहि दिन अगाडी लरी लै फरिया गीत ले पनि विवाद र चर्चा दुवै कमाएकी प्रितीले फेरी अर्को चुनौती दिँदै नक्कली साली लाहुरे लाली वजारमा ल्याएकी हुन् । लरी लै फरिया गीतको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उनले गायक युवराज मगर संग मिलेर यो गीत सार्वजनिक गरेकी हुन् । गीतमा युवराज मगर र चर्चित सर्जक प्रलाहद सुबेदीले शब्द कोरेका छन। युबराज मगरले संगीत गरेको सो गीतमा प्रिती आले, युबराज मगर, रमेश बाबु थापा बिष्णु मगर लगाएतले अभिनय गरेका छन।
यौ-न क्ष’मता बढाउन यसरी गर्नुस् यो-नि र लिं-गको मा’लिस : डा. बास्तोला
राम र अयोध्याका बारे प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा सत्य भयो भने के हुन्छ ? (भिडियो हेर्नुस्)